မြှျောလငျ့ နဆေဲဘဲ မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: ဦးပိုင်လီမိတက်
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်ကို ဧပြီလ(၄)ရက်နေ့ ၊ ၁၉၉၀ခုနှစ်မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဥပဒေများဖြစ်တဲ့ ၁၉၅၀ခုနှစ် အထူးကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေနဲ့ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေပြဌာန်းချက်တွေနဲ့ အညီ ဦးပိုင်လီမိတက်ကိုဖွဲ့ စည်းထူထောင်ခြင်း ဖြစ် တယ်။
(ခ)စစ်မှုထမ်းဟောင်းများနှင့် ၄င်းတို့ ၏မှီခိုသူဇနီးသားသမီးများသက်သာချောင်ချိရေး
(ဃ)နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေရေး
ဦးပိုင်လီမိတက်မှာ ဥေဿျှာင်အဖွဲ့ နဲ့ ဥက္ကဌရုံး(ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ )ဆိုကာ
မူဝါဒနဲ့ လုပ်ငန်းကိစ္စ များကို ဖွဲ့ စည်းပုံနှစ်ရပ်နဲ့ ခွဲခြားထားတယ်။
၇။ဗိုလ်ချုပ်လှရွှေ(တွဲဖက်စစ်ရေးချုပ်) တို့ နဲ့ ၂၀၁၀ခုနှစ်အထိဖွဲ့ စည်းပါဝင်နေတယ်။
အဖွဲ့ ဝင်(၁၂)ဦးပါဝင်တဲ့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ ကို ဖွဲ့ စည်း ခဲ့တယ်။
၃။ဗိုလ်မှူးချုပ်မောင်ညို အဖွဲ့ ဝင်
၇။ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်အောင်မြင့် - (ယခုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥက္ကဌ)
၁၂။ဦးမျိုးညွန့်-
့ဦးပိုင်လီမိတက်ဥက္ကဌဖြစ်သူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝင်းမြင့်ကိုစက်တင် ဘာလ၉ရက်၊၂၀၀၁ခုနှစ်နေ့ မှာ ရာထူးမှဖြုတ်ချပစ်ကာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်တင်အေး (ကာကွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာနပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေး၊ယခုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌ)ကို ဦးပိုင်လီမိတက် ဥက္ကဌအဖြစ်တာဝန်ပေးခဲ့တယ်။
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝင်းမြင့်ဖြုတ်ချခံရတဲ့ကိစ္စဟာ မလေးရှား နိုင်ငံနဲ့ ပက်သက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ ခြစားမှုများရှိခဲ့လို့ ဆိုတဲ့
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် ကို တိုင်ကြားအသိပေးမှုနဲ့ လည်းဆက်နွယ်ခဲ့တယ်။
ဦးပိုင်လီမိတက်မှာ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အေးဥက္ကဌဖြစ်လာပြီးနောက်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ 
၃။ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်မောင်ထွန်း အဖွဲ့ ဝင်
၂၀၁၀ခုနှစ်မှာ ဦးပိုင်လီမိတက်ဥက္ကဌဟာ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ဇော်ဦး(စစ်ရေးချုပ်)ဖြစ်လာကာ ဗိုလ်ချုပ် ၀င်းသန်းကတော့ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ၊ဒုတိယမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာအဖြစ် ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး သန်းထွန်းနဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှညွန်ကြားရေးမှူးများ၊အရာရှိချုပ်များပါဝင်တယ်။
ဦးပိုင်လီမိတက်နဲ့ ပက်သက်တဲ့လုပ်ငန်းများကို ၀န်ထမ်းပေါင်း ၉၆၁၆ယောက်နဲ့ လုပ်ကိုင်နေ ကာ လစာနှုန်းထားများမှာ
ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာ မညီမျှသောလစာနှုန်းထား အခွင့်အရေးများရှိနေတယ်။ ဦးပိုင် လီမိတက်မှ အငယ်တန်းစာရေးရဲ့ လစာမှာ (၄၇၀၀၀)ကျပ်နဲ့ စားစရိတ်ငွေမှာ (၃၆၀၀၀)ကျပ် (ရုံးပိတ်ရက်၈ရက်မပါ)စုစုပေါင်း(၈၃၀၀၀)ကျပ်ရရှိကာ တပ်မတော်မှတပ်ကြပ်ကြီးများထက်ပင် လစာပိုများနေတယ်။ဦးပိုင်လီမိတက်မှဝန်ထမ်း(၁၀၀၀)ခန့် မှာလည်း ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်နေသော ကုမ္ပဏီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများမှာလုပ်ကိုင်နေတယ်။ကုမ္ပဏီများမှဦးပိုင်ဝန်ထမ်းရရှိတဲ့လစာထက် ပိုပေးထားတယ်။
၁၉၉၀ခုနှစ်မှာ ဦးပိုင်လီမိတက်ကို ကျပ်ကုဋေ(၂၀၀၀)နဲ့ မတည်ခဲ့တယ်။ အစုရှယ်ယာတစုကို ကျပ်(၁၀၀၀)နှုန်းနဲ့ အစုရှယ်ယာပေါင်းသန်း(၂၀)ခွဲဝေကာ (က)အစုရှယ်ယာကို ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန(ကက၀ယ်) ညွန်ကြားရေးမှူးရုံးမှတဆင့်ထည့်ဝင်တယ်။ (ခ)အစုရှယ်ယာကိုတပ်မ တော်သားဝန်ထမ်းများ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှတည်ထောင်ထားတဲ့ အသင်း၊အဖွဲ့ များနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတို့ မှတဦးခြင်းဖြစ်စေ၊အဖွဲ့ အစည်းလိုက်ဖြစ်စေထည့်ဝင်ရတယ်။ ဦးပိုင်လီမိ တက်ရဲ့ အစုရှယ်ယာများဟာ ငွေသေစံနစ်ဖြစ်လို့ ပြန်လည်ထုတ်ယူခွင့်မရှိပဲ အမြတ်ငွေအတိုး သာထုတ်ယူခွင့်ရှိတယ်။အမြတ်ငွေအတိုးနှုန်းဟာ ငွေ(၁၀၀)ကျပ်ကို တလ(၃)ကျပ်တိုးနှုန်းဖြစ် တယ်။ တနှစ်မှာတကြိမ်သာအမြတ်ငွေအတိုးနှုန်းထုတ်ပေးတယ်။ စစ်ရာထူးကြီးလေအစုရှယ်
ယာ များများထည့်ဝင်လို့ ရတာကို ဦးပိုင်ရှယ်ယာစာရင်းဇယားများမှဖော်ပြနေတယ်။
(၂၀၊၄၊၁၉၉၀)ရက်နေ့ မှ(၃၀၊၃။၂၀၀၂)ရက်နေ့ အထိအစုရှယ်ယာထုတ်ဝေရောင်းချစာရင်း
(အရှေ့ အလယ်ပိုင်းစစ်တိုင်းမဖွဲ့ ရသေးချိန်ဖြစ်လို့ စာရင်းထဲမှာမပါဝင်)
ဦးပိုင်လီမိတက်ရဲ့ အစုရှယ်ယာစံနစ်ဟာ ထိပ်တန်းစစ်ခေါင်းဆောင်များ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဖြစ်နေကာ အောက်ခြေတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့ များအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်မရှိဖြစ်ရတယ်။ စစ်တိုင်းမှူး များမှ တပ်ရင်း၊တပ်ဖွဲ့ များရဲ့ နှစ်စဉ်ရရှိတဲ့ အစုရှယ်ယာအမြတ်ငွေ(အတိုး)များကို အောက်ခြေ ရဲဘော်များထံ အတိအကျခွဲဝေမပေးပဲ အစုရှယ်ယာအသစ်များကို ထပ်မံဝယ်ယူကာ ဦးပိုင် ဘဏ္ဍာငွေထဲကိုဖြည့်တင်းပေးကြတယ်။အစုရှယ်ယာအများဆုံးထည့်ဝင်နိုင်တဲ့ စစ်တိုင်းမှူးဟာ အမည်ကောင်းရ၊ရာထူးတက်လမ်းရှိကြတယ်။စစ်တိုင်းမှူးများကလည်းအစုရှယ်ယာပိုထည့်နိုင်တဲ့အောက်ခြေတပ်ရင်းမှူးများကိုစစ်ဦးစီးတက္ကသိုလ်(ဥစတ)ကိုစေလွှတ်မယ်ဆိုတဲ့မက်လုံးပေးထားကြတယ်။တပ်ရင်းမှူးကလည်း(ဥစတ)တက်ခွင့်ရမှ စစ်ဦးစီးမှူး(ဂျီဝမ်း)ဖြစ်နိုင်ကာတိုင်းမှူး ရာထူးကိုတက်ခွင့်ရှိနိုင်တယ်။
တပ်ရင်းတရင်းဟာ အစုရှယ်ယာ ငွေကျပ် သိန်း (၂၀၀) ထည့်သွင်းထားပါက တနှစ်အတွက်
အမြတ်ငွေ(၇၂)သိန်းရရှိတယ်။ တိုင်းမှူးကသတ်မှတ်ထားတဲ့ တနှစ်အတွက် အစုရှယ်ယာငွေ
တပ်ရင်းသက်သာချောင်ချိရေး ရန်ပုံငွေအဖြစ် သုံးစွဲနေရတယ်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ တပ်ထဲမှ သက်သာချောင်ချိရေးအရောင်းဆိုင်များမှစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများတင်မရောင်းချနိုင်ပဲဦးပိုင်လီမိတက်သာ တနေ့ ထက်တနေ့ ကြီးပွားချမ်းသာလာတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ရဲမွန်ဒေသမှ
တပ်ဖွဲ့များမှဦးပိုင်ထဲမှငွေများပြန်ထုတ်ပေးရန်အရေးဆိုလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်။အဆိုးဆုံးမှာအောက်ခြေရဲဘော်တွေရဲ့ဘ၀များကိုမကြည့်တဲ့တပ်ရင်းမှူးတွေကအစုရှယ်ယာပိုထည့်နိုင်ကာ(ဥစတ)သို့ တက်ရောက်ခွင့်ရတယ်။ အောက်ခြေရဲဘော်တွေဘ၀နဲ့ တပ်သက်သာချောင်ချိ ရေးကြည့်တဲ့ တပ်ရင်းမှူးတွေကျတော့ သက်မှတ်ထားတဲ့ အစုရှယ်ယာငွေ မထည့်နိုင်လို့service ကြာပေမယ့်လည်း (ဥစတ)ကိုတက်ခွင့်မရလို့ တပ်ရင်းမှူးအချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းကွဲကုန် တယ်။
တပ်မတော်မှ မသန်မစွမ်းရဲဘော်များကိုလည်း ငွေကျပ်တသိန်းနှုန်းနဲ့ ဦးပိုင်အစုရှယ်ယာထဲကို ထည့်ပေးတယ်။ တပ်မှ အငြိမ်းစားပေးလိုက်တဲ့ မသန်မစွမ်းရဲဘော်တွေဟာ သူတို့ ရဲ့ အစု ရှယ်ယာငွေကို တနှစ်မှာတခါ အတိုးခံစားခွင့်အဖြစ် ကျပ်ငွေ(၃၆၀၀၀)ရရှိတယ်။ ဦးပိုင်လီမိ တက်ရုံးချုပ်ကို အမြတ်ငွေလာရောက်ထုတ်ယူချိန်မှာ ထုတ်ယူသူများပြားကာ တန်းစီစံနစ်နဲ့တိုးကြိတ်ထုတ်ယူရပြီး စာရေးစာချီ၊ လုံခြုံရေးများရဲ့အော်ခြင်း၊ငေါက်ခြင်းကိုလည်းကြုံတွေ့ ရ
တယ်။ ခရီးဝေးမှလာရောက်ငွေထုတ်ကြရတဲ့ မသန်မစွမ်းရဲဘော်များမှ ဦးပိုင်ရဲ့ ဒုက္ခများကိုမခံ နိုင်တော့လို့သူတို့ ရဲ့ ကျပ်တသိန်းတန်အစုရှယ်ယာများကို ဦးပိုင်အစုရှယ်ယာဌာနမှ ၀န်ထမ်း များအား ကျပ်ရှစ်သောင်းဈေးနှုန်းနဲ့ တရားမ၀င်နားလည်မှုနည်းနဲ့ ရောင်းချတဲ့ဈေးကွက်လည်း ရှိနေတယ်။ဦးပိုင်အစုရှယ်ယာဌာန၀န်ထမ်းများမှမသန်မစွမ်းရဲဘော်များထံမှဝယ်ယူတဲ့ရှယ်ယာများကို ကိုယ်စားလှယ်လွဲစာ(GP)များနဲ့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြုလုပ်ကာဝယ်ယူခွင့်ရခဲ့လို့ ပြန်ရောင်းချ ချိန်မှာအနည်းဆုံးကျပ်ငွေ(၁၀၁၀၀၀)နှုန်းနဲ့ ရောင်းချကြတယ်။
၂၀၀၈ခုနှစ်ဖွဲ့ စည်းပုံအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေအရ တပ်မတော်အရေးကိစ္စများကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် မှသာကိုင်တွယ်ခွင့်ရှိနေတယ်။၂၀၀၈ခုနှစ်ဖွဲ့ စည်းပုံအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေ အခန်း(၇) ပုဒ်မ(၃၃၈)မှာ “နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိလက်နတ်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းအားလုံးသည်တပ်မတော်၏ကွပ်ကဲမှုအောက် တွင်ရှိရမည်”။ဒါ့အပြင် ပုဒ်မ(၃၄၃)မှာလည်း“စစ်ဘက်တရားစီရင်ရာတွင်(က)တပ်မတော်သား များအတွက်အဖွဲ့ ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တဦးတည်းဖြစ်စေ ဥပဒေနှင့်အညီစီရင်နိုင်သည်၊ (ခ)တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏အဆုံးအဖြတ်သည်အပြီးအပြတ်ဖြစ်သည်” ဆိုကာပြဌာန်းထားတယ်။ ဦးပိုင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ငွေကြေးစာရင်းများကိုနိုင်ငံတော်စာရင်းစစ်ရုံးမှစုံစမ်းနိုင်ခွင့်မရှိပဲဦးပိုင်လုပ်ငန်းစစ်နဲ့ တပ်မတော်ငွေစာရင်းရုံး(CMA) မှသာ စုံစမ်းခွင့်ရှိတယ်။ ဦးပိုင်လီမိတက်လုပ်ငန်းစစ်
ဆေးဌာနမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ်အေးသိုက်(ဒီအက်အေ၂၀)၊ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးခင်အေး(အိုတီစီ၁၂)တို့ မှဒါရိုက်တာများအနေနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်။
မြန်မာ့စီးပွားရေးလောကမှာအသေးစားလုပ်ငန်းမှအကြီးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအထိနေရာလပ် မကျန်ရအောင် ဦးပိုင်လီမိတက်မှ ချုပ်ကိုင်ထားတယ်။ နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမှု (foreign direct investment) များနဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကိုလည်း ဦးပိုင်လီမိတက်သာ အခွင့်ထူးတရပ် အနေနဲ့ ရရှိထားတယ်။ ဒါကြောင့်ဦးပိုင်လီမိတက်ဟာ တနေ့ထက်တနေ့ ကြီးထွားလာတယ်။ ဦးပိုင်လီမိတက်မှဆောင်ရွက်လျှက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းများမှာ-
မြန်မာနိုင်ငံဟာ တံခါးဖွင့်ဈေးကွက်စီးပွားရေးစံနစ်ကိုကျင့်သုံးနေပေမယ့်လည်း ဈေးကွက်ယှဉ် ပြိုင်မှု (competitive marketing) နဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ဈေးကွက်စီးဆင်းမှု (free floating marketing)တို့ ကင်းမဲ့နေတယ်။ စီးပွားရေးလောကတခုလုံးကိုစစ်တပ်အကျိုးစီးပွားကိုအခြေခံ ထားတဲ့ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီမှ ချုပ်ကိုင်ထားတယ်။ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး
နေ၀င်းဟာအာဏာမသိမ်းခင်မှာစစ်တပ်ကိုစီးပွားရေးလောကထဲအထိအရှိန်အ၀ါရှိစေဖို့ မြ၀တီ၊ ကြယ်ငါးပွင့် အစရှိတဲ့အမည်များနဲ့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လာတယ်။ တပ်မတော်သက်သာချောင် ချိရေးအမည်နဲ့ လည်း သစ်လုပ်ငန်းမှဆားလုပ်ငန်းအထိချဲ့ ထွင် လုပ်ကိုင်လာတယ်။ တဖက်မှာ လည်း (Defend Service Institute) အမည်နဲ့ စစ်တပ်ကိုတည်ဆောက်မွေးမြူခဲ့တယ်။ တိုင်းပြည်စီးပွားရေးမှာ စစ်တပ်အကျိုးစီးပွား ခြေကုတ်ယူထားရေးအတွက် ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီဟာ ကိုယ်ပွားတခုဖြစ်တယ်။ တိုင်းပြည်အာဏာကိုတပ်မတော်မှလွှမ်းမိုးနေရာယူထားလို့ သာ ဦးပိုင် ကုမ္ပဏီ ကြီးထွားနေခြင်းဖြစ်တယ်။ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီမှ တိုးချဲ့ လာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ-
၁။အထည်ချုပ်စက်ရုံလုပ်ငန်းကို မလေးရှားမှ Comfort International Incorporate (CII)
၂။ငပလီကမ်းခြေနဲ့ ကမ်းသာယာကမ်းခြေတို့ မှာ ဟိုတယ်နဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကိုကမ္ဘောဇ၊
ထူးမော်၊အေရှဝေါလ်၊၀ုဒ်လန်ဒ်၊ယုဇန၊ထွန်းလင်းရောင်၊ဆဲဗင်းဖိုးဆဲဗင်းကုမ္ပဏီ တို့ နဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်ခြင်း
၄။မင်္ဂလာဒုံမြို့ နယ်၊ပျဉ်းမပင်မြေများကို မြန်မာမာမီးဒါဘယ်ဒက်ကာလီမိတက်ကို ခေါက်ဆွဲ
၅။ဂရက်နိုိက်အလှဆင်ကျောက်ပြားစက်ရုံကို ကျိုက်ထိုမြို့ မှာတည်ဆောက်ခြင်း
၆။သူဌေးကျွန်းဟိုတယ်နဲ့ ကာဆီနိုလုပ်ငန်းကို ထိုင်းမှအက်ဒမန်ကလပ်လီမိတက်ဒ်နဲ့ ပူး
ဦးပိုင်လီမိတက်ဟာတနေ့ ထက်တနေ့ ကြီးထွားလာတာကိုရှယ်ယာအမြတ်ငွေစာရင်းမှဖော်ပြ နေတယ်။
(က)အစုရှယ်ယာရှင်များသို့အမြတ် ခွဲဝေမှုရာခိုင်နှုန်း
အမြတ် ခွဲဝေမှုရာခိုင်နှုန့်း 
တိုင်းပြည်ရဲ့သံယံဇာတအရင်းအမြစ်နဲ့ အာဏာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဦးပိုင်လီမိတက်ဟာ အကျိုး အမြတ်များသာ ပိုမိုရရှိနေတယ်။ ဦးပိုင်လီမိတက်ရဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာကုမ္ပဏီတွေ ဖြစ်တဲ့ မြန်မာရူဘီအင်တာပရိုက်စ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဟာ မိုးကုတ်၊မိုင်းရှူးနဲ့ နန့် ယားကျောက်မျက်တူး ဖော်ရေးလုပ်ငန်း၊ ရာဖြတ်လုပ်ငန်း၊ သပိတ်ကျင်းရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများမှ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ
သန်း နဲ့ ချီအမြတ်ရရှိတယ်။
စစ်တပ်ကိုကြီးကြပ်ခ ငွေကြေးအဖြစ် ပေးနေရတဲ့ ငွေသန်းပေါင်းများစွာဟာ ကျောက်တွင်းလုပ် သားများရဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်များထဲမှဖြစ်တယ်။ ဒါ့အပြင်မြန်မာရူဘီအင်တာပရိုက်စ်ကုမ္ပဏီလီမိ
တက် ဟာ (၂၀၀၁-၀၂)မှာ နန့် ယားဒေသကျောက်တူးဖော်ရေးမှ အသားတင်အမြတ်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၆၇၂.၂၈၅)နဲ့ မြန်မာကျပ်ငွေ(၁၇၀.၄၀)သန်းရရှိခဲ့တယ်။ရာဖြတ်လုပ်ငန်းမှ ကျပ်(၁.၁၉၆)သန်းရရှိတာကို (၂၀၀၁-၀၂)ခုနှစ်ဦးပိုင်အစီရင်ခံစာမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းအားလုံးကို ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီမှ လက်ဝါးကြီးအုပ် ထားတယ်။ပတ္တမြားကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးကိုမြန်မာရူဘီအင်တာပရိုက်စ်ကုမ္ပဏီနဲ့ လုပ်ကိုင် တယ်။ ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းမှာတော့ မြန်မာအင်ပီးရီးရယ်ဂျိတ်(ကျောက်မျက်ရတ နာ) ကုမ္ပဏီလီမိတက်အမည်နဲ့ လုပ်ကိုင်နေတယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့ မြေပေါ်မြေအောက်၊ရေပေါ်ရေအောက်နဲ့ လေထုအတွင်းရှိ သံယံဇာတအားလုံးကို
ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်သာ မျှတစွာခွဲဝေအသုံးချရမှာဖြစ်တယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့အမျိုး သားစီးပွားရေးမှာ ပြည်သူလူထုရဲ့ လူသားအရင်းအမြစ်များအပါအ၀င် လူထုလူတန်းစားအလွှာ အသီးသီးရဲ့ စွမ်းအားများကိုသာအခြေခံရမှာဖြစ်တယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ် ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေ အခန်း(၁)နိုင်ငံတော်အခြေခံမူများပုဒ်မ(၃၅)မှာ“နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးစံနစ်သည်ဈေးကွက်စီးပွား ရေးစံနစ်ဖြစ်သည်။” ပုဒ်မ(၃၆)အပိုဒ်ခွဲ(ခ)မှာ “စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်တရားသဖြင့်ယှဉ်ပြိုင် ခြင်းကိုပျက်ပြားစေရန် တဦးတယောက်ကဖြစ်စေ၊အစုအဖွဲ့ ကဖြစ်စေ လက်ဝါးကြီးအုပ်ဆောင် ရွက်မှု သို့ မဟုတ် ဈေးကစားမှုပြုခြင်းဖြင့်အများပြည်သူတို့ ၏အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်နစ်နာ စေခြင်းမှတားဆီးကာကွယ်မည်” ဆိုကာပြဌာန်းထားတယ်။ ဒါ့အပြင် ပုဒ်မ(၃၇) အပိုဒ်ခွဲ(ခ) မှာလည်း “နိုင်ငံပိုင်သံယံဇာတပစ္စည်းများအား စီးပွားရေးအင်အားစုများက ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း ကိုကွပ်ကဲကြီးကြပ်နိုင်ရန်လိုအပ်သည့်ဥပဒေပြဌာန်းရမည်” လို့ ပြဌာန်းထားတယ်။ ဖွဲ့ စည်း အုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေအရပြဌာန်းချက်များရှိပေမယ့်လည်း လွှတ်တော်အတွင်းမှနိုင်ငံရေးပါတီများရဲ့အမတ်များဟာ ဦးပိုင်လီမိတက်နဲ့ ပက်သက်နေတဲ့ လက်ဝါးကြီးအုပ် စီးပွားရေးကိစ္စများအပေါ် အရေးတယူဆောင်ရွက်မှုမရှိဖြစ်နေတယ်။
၂၀၁၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်ပိုင်းနဲ့၂၀၁၂ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များဟာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ကုန်သွယ်ရေးဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများကိုဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့တယ်။နိုင်ငံတကာစီးပွား ရေးအုပ်စုကြီးများလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာရင်းနှီးမြုတ်နှံ့ လာကြပြီဖြစ်လို့ဦးပိုင်လီမိတက်အတွက် သပိတ်ဝင်၊အိတ်ဝင်ဆိုသလို အကျိုးအမြတ်များပေါ်ထွက်မှာဖြစ်တယ်။ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာငါ့ဟာ မှတ်ပါလို့ ဆိုတဲ့ အာဏာရှင်စံနစ်ရဲ့ အမွေဆိုးများကိုဆက်ခံထားပါကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်စီးပွား ရေးစံနစ်ကိုပဲ အကောင်အထည်ဖော်ပါစေ အောင်မြင်မှုမရနိုင်တာကို
မဆလအစိုးရ ရဲ့ ဆိုရှယ် လစ်စီးပွားရေးစံနစ်မှဖော်ပြနေပါတယ်။ ။
၁။Update on myanmar economic holdings’ activities, us embassy rangoon / wikileaks, 2011.
၂။လွှတ်တော်မှာအမတ်မင်းများမေးသင့်သောဦးပိုင်အကြောင်း / ဗိုလ်သိန်းတန်, ၂၀၁၁.
၃။ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်၊ ၂၀၀၁-၂၀၀၂ခုနှစ်၊ (၁၂)ကြိမ်
မြောက် အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ / ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်စန်း, ၂၀၀၂.
Posted by Mr Htay Tint at 2:47 PM
ကိုဌေးနိူင် ဝိဥာဉ် အတွက်
ဋ္ဌေးနိုင် မိသားစု 1, 2,3,(မေသင်္ကြန်ဟိန်း)
ABSDF ကျောင်းသားရဲဘော် ဋ္ဌေးနိုင် မိသားစု
၁၉၈၄ မှာ ဓါတုဗဒေနဲ့ဘှဲ့ရပါတယျ။ ၁၉၈၈ ဇူလိုငျလ မှာ လှိုငျမွို့နယျ ကြောငျးသားမြားသမဂ်ဂမှာ ဥက်ကဌတာဝနျကို ယူခဲ့ရပွီး ၂ဝစကျတငျဘာ၁၉၈၈မှာ ပွညျတှငျး အခွအေနမြေားတငျပွရနျ ဒျေါစုနဲ့တိုငျပငျပွီး နယျစပျမှတဆငျ့ ပွညျပသို့ထှကျခှာလာခဲ့ပါတယျ ။ ဟှစေတေီမှာ စခနျးကျောမီတီလုပျခဲ့တယျ ။၃၀၃ ကြောငျးသားတပျမတျောမှာ ၁၉၉၀ ထိ ထမျးဆောငျခဲ့ဖူးတယျ ။ မဟာခြိုငျးမှာ ၁၉၉၉ထိ နခေဲ့တယျ ။KSO အဖှဲ့ ဝငျခဲ့/ မနီလှိုငျမှာ ကြောငျးသားအစညျးအရုံးနဲ့ ယူအနျမှာ တှဲပွီး လုပျခှငျ့ရခဲ့တယျ။ ၂၀၀၁ မလေ ၁ရ ရကျမှာ နယျသာလနျရောကျတယျ နယျသာလနျယဉျကြေးမှု စာပနှေငျ့ ဘာသာစကားသငျတနျးတကျခဲ့တယျ ။ မွနျမာ့ဒီမိုကရစေီအငျအားစုမှာ ၂၀၀၄ က အထှထှေအေတှငျးရေးမှုးတာဝနျယူခဲ့တယျ ။ BDC အ့ဝငျအဖွဈရပျတညျရငျး ခရဈယာနျညီညှတျရေးပါတီဝငျခဲ့တယျ ဥရောပကူးသနျးရောငျးဝယျရေးသငျတနျး ၊ လူမှုကူညီရေးအဖှဲ့ တညျဆောကျရေး ရနျပုံငှရှောဖှရေေး သငျတနျးမြားတကျခဲ့သညျ ။ ၂၀၁ဝမှာIFBNC (နယျသာလနျ) မွနျမာပွညျမှာ လူ့ အခှငျ့အရေးတှေ လူတိုငျးနားလညျ တှေးချေါတတျဖို့ FBE(2012)မှာ တာဝနျယူနသေညျ။ 2012 နောကျပိုငျး အကွမျးဖကျရနျ ကာကှယျရေး လုပျနဆေဲ ဖွဈတယျ ။ ၂၀၁၄ ပွညျပရောကျမြား အတှကျ အခကျြအလကျရှာပေးတယျ ။ ၂၀၁၅မှာ ရာသီဥတု လလေ့ာသငျယူတယျ ။ ဖွနျ့ ဝပေေးတယျ လူခမျြးသာဖို့ ထငျပျေါကြျောကွားဖို့လူတှငျကယျြလုပျဖို့ စိတျမဝငျစားပါ ။ တို့ မီး ရှို့ မီး မလုပျတတျပါ ။